Blaogin'ny orinasa: The Rap Song | Martech Zone
Tianay SeanieMic, mpihira parody izay nahavita fanapahana mahafinaritra be dia be. Nalaza be eraky ny tranonkala ny hirany, ka nangataka taminy izahay handrora rima momba ny bokinay, Fitorahana bilaogy ho an'ny Dummies. Nofantsihan'i Seanie izany!
Tsy nisy afa-tsy kopian'ny boky nosoratanay, teny an-tanany izahay, nanangana labiera izahay ary andro vitsivitsy taty aoriana dia nanana sangan'asa! Raha namaky ilay boky ianao dia ho tianao ity… raha mbola tsy namaky ilay boky ianao dia te ho lany ary hividy kopia!
Ity Fitorahana bilaogy ataon'ny orinasa Dummies, ny Hira Rap:
Bloggin 'Ho an'ny Dummies nataon'i SeanieMic
Hiasa amin'ny horonantsary izahay amin'ny fiandohan'ny taona 2011. Misaotra Sean!
Tags: marketing mahazatrahaino aman-jery sosialy vita tsaramedia sosialy und rechttoushennetoushenne.de